Otu esi eji ejiji na Jordan | Akụkọ Njem
Mariela Carril | | Atụmatụ, Jordan
I kpebiela gaa Jọdan mgbe ọnọdụ ahụike gbaghachi nkịtị. Read na-agụ maka njem nleta ebe, nri, visa, njem na ndị ọzọ ma na ị na-aghọta na onye ọ bụla na-ekwu okwu banyere kedu ka ụmụ nwanyị ga-esi eji ejiji n'ime mba ahụ wee chọpụta na ị bụ onye ahụ, bụrụ nwanyị.
Nwanyị nọ a obodo islam odighi nfe. Dika odi n’akuku ozo nke uwa umu nwanyi ndi ji aka ha ejikwa onwe ha aka ma lebara ha anya, ebe onodu a nwere uzo ozo n’ihi na obu obodo okpukpe di egwu. Ka anyị hụ taa mgbe ahụ esi eji ejiji na Jordan.
Jọdan na ọdịbendị ya
Jordan bụ mba nwere akụ dị egwu nke mere ka ọtụtụ ndị njem hụ ya na-atọ ụtọ. Nwere ụgbọelu mba abụọ, otu na Amman, isi obodo mba, ọzọ na ụsọ Oké Osimiri Uhie, na Aqaba, n'ihi ya ị nwere ike ịhọrọ ebe ị ga-abanye ma ọ bụ banye site na otu, gafere mba ahụ, ma pụọ ​​site na nke ọzọ.
Ọ bụrụ n ’ị họọrọ bụ ịmalite isi obodo nke ọma, n’ihi na ọ na-etinye ihe ngosi nka dị mma ma dịkwa mkpa na ebe nrụọrụ dị mkpa. Nwere ike ime njegharị obodo ma dezie njem ụbọchị. Ọmụmaatụ, nke Amman ị nwere ike ịga na mkpọmkpọ ebe nke Ebugara, otu n'ime obodo kacha ochie na Middle East nwere mosaics na narị afọ nke asaa na nke asatọ. Nwere ike ịga n'ihu njem gị Ugwu nebo ịtụgharị uche n'akụkọ ihe mere eme na Akwụkwọ Nsọ Ndagwurugwu Jọdan na-akwụsị na Oke osimiri nwụrụ anwụ iji were obere, mmiri na-ese n'elu mmiri.
Nke a na ugwu nke mba, ebe Amman emi odude, nwere nnọọ ọgaranya na tụụrụ ala na islam akụ dị ka Ajlọ Ajlon ma ọ bụ obodo nke Gerasa. Seenhụ ihe niile a, ị nwere ike mgbe ahụ gawa n'ebe ndịda, na mbara, na Akọrọ ndagwurugwu nke Wadi Mujib, Kerak na ulo-elu ya nke Cruzados, Petra na ndagwurugwu-ya ebe inyinya camel, ugwu-ya, jegharia n'ọzara nke Wadi Rum na 4 × 4 jeep, site na Ndagwurugwu ọnwa ịchọpụta ọdịnala ndị Bedouin ruo mgbe ị rutere Aqaba na mma ya dị n'okpuru mmiri. Na-amaja imikpu mmiri?
Ma eziokwu bụ na ka ị na-eme ihe a niile, na Ọ bụrụ na ị bụ nwanyị, ị ga-akpachara anya mgbe ị na-eji ejiji. Jọdan bụ mba ukwu na-agbanwe agbanwe ya mere ụkpụrụ na-agabiga kpuchie ntutu na ntutu ọ bụrụ na ị bụ nwa agbọghọ. Ọ dịghị ebe a na njedebe kachasị agbanwe agbanwe, ị hụrụ ụmụ agbọghọ na jeans ma ọ bụ akpụkpọ ụkwụ egwuregwu mana ọ bụghị ọtụtụ. Yabụ nke kacha mma adighi adọta uche ma buru akpa uwe, akwara ma ọ bụ obere uwe. Onweghi ihe n’egosi oke akpukpo aru.
Ikwesighi ikpuchi onwe gi dika oriọna ochie, were ole na ole nnukwu ịchafụ iji kpuchie isi gịE kwuwerị, ị nọ n'ebe ọdịda anyanwụ na ọ dịghị ihe a na-atụ anya n'aka gị ma ọ bụghị nkwanye ùgwù. Abịa na ntutu, ị nwedịrị ike ịhapụ kerchief n’obodo, mana cheta nke ahụ ahapụla ụlọ nkwari akụ ma ọ bụ ụlọ mbikọ na ntutu mmiriBiko kpoo ya nke ọma tupu n'ihi na a na-ewere ntutu mmiri dị ka mmekọahụ.
Banyere uwe n'ozuzu, a na-anwa mmadụ iyi uwe dị mfe ma jiri ya mee ihe ma were anyanwụ ma ọ bụ gaa oyi. Nke a abụghị ikpe ebe a, ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ị gafere obodo, ụlọ ngosi ihe mgbe ochie ma ọ bụ ebe akụkọ ihe mere eme. N'ime ụlọ ezumike ị nwere ike ịga ije na mkpụmkpụ, mana ọ bụrụ na ị na-agagharị na ime obodo, ọbụlagodi Amman, ị gaghị achọ ịkparị enweghị nkwanye ùgwù naanị iji nwee ahụ iru ala.
Enwere okwu abuo nke nwanyi kwesiri ịtụle na obodo Alakụba: nkwanye ùgwù maka ọdịbendị na ezi uche. Ebe ọ bụla ị gara, mee ihe ị hụrụ, ka a na-ekwu n'okwu ahụ, ma lee, ọ metụtara ya kpam kpam. Ikwesiri ima na uwa abughi otu, na enwere omenaala di iche-iche na kwa na-enweghi ikerita ha, anyi aghaghi asọpuru ha. Ihe ọzọ bụ ezi uche. Adọtala uche. Aregaghị achọ ịbụ ebe etiti omume rụrụ arụ sitere na ụmụ nwoke na ịkatọ ịsọpụrụ ụmụ nwanyị.
Ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ ịga n'ụsọ osimiri n'ezie ị nwere ike iso Uwe mmiri. Enwere ọtụtụ ebe ntụrụndụ na mpaghara Oké Osimiri Nwụrụ Anwụ na ị ga-ahụ ntakịrị ihe niile, site na ụmụ nwanyị na akwa burquini, uwe elu, na bikinis. Ije ije ma ọ bụ ịnọ n'oké osimiri ma ọ bụ sunbathe dị mma, mana ịkwesighi ịga n'okporo ámá ma ọ bụ ụlọ nkwari akụ yi uwe dị otú ahụ. M siri ọnwụ, ị gaghị enwe mmasị n'ọnọdụ ahụ ị ga-anọ n'otu ntabi anya.
Kedu maka akpụkpọ ụkwụ ahụ? Maka ime obodo Akpụkpọ ụkwụ ma ọ bụ akpụkpọ ụkwụ ọkụ Ha dị ezigbo mma mana ọ bụrụ na ị gaa n'ọzara ma ọ bụ Petra ị nwere ike were akpụkpọ ụkwụ trekking ma ọ bụ ihe nwere a ọzọ grippy naanị. N'ikwu okwu banyere ime obodo na ime obodo, ị nwere ike itinye akpa gị ma ọ bụ akpa azụ na-eche maka mpaghara abụọ a na uwe ha dabara adaba: maka obodo, uwe ogologo silk, akwa T-shirts, akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ ụkwụ nwere naanị ụkwụ, akpa na-ajụ iji tinye ihe ndị ahụ ị zụrụ, na maka ime obodo ị gbanwere akpụkpọ ụkwụ ma tinye okpu.
Emechaa edemede nke taa banyere otu esi eji ejiji na Jọdan ma ọ bụrụ na ị bụ nwanyị ị ga -rịrị rcheta ikpuchi akụkụ ahụ ndị a: obi, ubu, afọ na ụkwụ. Uwe ogologo nwere ike ịdị mkpa ma ọ bụrụ na ị banye na ụlọ alakụba ma ọ bụ saịtị okpukpe, mana ikpuchi ubu n'akụkụ ndị ọzọ ezuola. Womenmụ nwanyị ndị Jọdan na-ekpuchi isi ha na ntutu isi n'okpuru hijabs ma ọ bụ burqas, mana ị bụ onye njem nleta na otu ọchịchọ ahụ anaghị adakwasị gị. N'ebe okpukpe, ha na-enyekarị gị ihe ị ga-eme, ma ọ bụrụ na ịnweghị.
Jọdan dị ugbu a karịa Ijipt mgbe ọ na-abịakwute uwe, ma chee na ọ bụrụ na ị na-aga njem a haziri ahazi ọ na-adị mfe mgbe niile karịa ma ọ bụrụ na ị kpebiri ịkwaga naanị gị. Ihe ikwesighi ichefu, dika ihe ozo, bu ihe anwu anwu, ugogbe anya, okpu di nma, ude mmanu na anwu. Na n'ezie, ịchọrọ ịnụ ụtọ oge mana nke ahụ, mgbe ọrịa a dakwasịrị anyị niile n'ụlọ, karịrị ntụkwasị obi. Na na atọ!
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » njem » Atụmatụ » Otu esi eji ejiji na Jordan